ikhaya » Okufumaneka » I-Canon Burbank Iyaba Yinyaniso
I-Canon Burbank Iyaba Yinyaniso
Ndisandul 'uhlonipho lokutyelelaCanonEsitsha (12,000 square ft.), "Canon Burbank"- I-Technology Technology & Centre Centre inkxaso kwiziko le-3400 West Olive Ave., eBurbank, eCalifornia kwaye ihamba ngokufutshane kufuphi neBurbank Studios kunye neWarner Brothers.
Canon I-Burbank inayo yonke i-tech yakutshanje kwaye into evuyisayo kukuba le ndawo inokuvulela hollywood Uluntu! Ithetha ntoni le nto? Imicimbi yezemfundo, i-demos yemveliso, ukuhlolwa kweemveliso kunye nemiboniso yemveliso iya kudlala indima enkulu Canon Burbank. Ukongezelela, ukuba igumbi likhoyo kwaye lingekhe lihleliwe, abantu abachaphazelekayo bangakwazi ukufikelela kuyo ngaphandle kokuhlawulwa! Ewe, ufunda loo nto! Yinkonzo yamahhala leyo Canon Burbank linika njengendlela ukunceda abafoti kunye cinematographers ngelixa zokusombulula okanye uceba iiprojekthi ezizayo. Ukongezelela, Canon Unabasebenzi abakulungele ukukunceda ekufumaneni isisombululo esipheleleyo. Khawucinge - ubuchule bokucingisisa nge Canon Pro ngqo kwiziko labo!
Canon Iziganeko zeBurbank zikarhulumente ezivela kwiinkampani ezifana TBC Consoles, CorporationyayeSGO.
Andikholelwa loo nto Canon Libala nantoni na kule ndawo!
IINKONZO ZENKCAZO zibandakanya:
Umgangatho woshishino lwe-4K (Barco 4K DP4K-P) Kunye neC DI
Indawo yethu entsha yeBurbank ibonisa umgca wokuzibophelela kwethu ukuphulaphula abaxhasi bethu, baqonde iimfuno zabo kwaye banikeze oko bakudinga ukuzisa iiprojekthi zabo zobugcisa kunye neenkanuko. Njengoko Canon Iyaqhubeka nohambo lwayo ekuncedeni uluntu lwentsebenzo kunye nokuguqulwa kweenguqu kulo mboni, yethu imishini icacile ngakumbi kunanini ngaphambili, ukuba ibe yimithombo kunye nebhekoni kubasebenzi bezoshishino, "kuchaza uEliott Peck, uMlawuli oyiNtloko kaMongameli kunye noMphathi Jikelele we-Imaging Iqela lezobuchwepheshe neNxibelelwano, Canon USA, Inc.
U-Alex Sax, iNgcali yeePro Market, Canon USA, Inc., uchaza ukuba wonke umntu wamkelekile kwiziko elitsha - enoba shooter DSLR okanye lokuqala ixesha YouTube videographer, Canon I-Burbank iyisibonelelo sabantu bonke.
Kwindawo yokufumana, ngaphandle kwe "Bookcase Set" ekhoyo CanonI-C200 ne-C700 ikhamera ngaphandle, ukubonakaliswa kweekhamera, iilensi, izixhobo kunye nabashicileli (apho umntu angashicilela khona iifoto zovavanyo) ezikhoyo CanonEnye iminikelo yamuva. Enye ye CanonAma-Emmy Awards ayenokuboniswa! Iifoto ezigqithiseleyo zixhomekeke kuwo wonke, zinika uluvo lwegalari yezobugcisa, kunokuba iziko leenkonzo zobuchwepheshe.
KwiNkonzo kunye neNkxaso, uRichard Hahm, uMphathiswa, iNkxaso yezobuGcisa, Canon USA, Inc., banako Lungisa yonke into esuka kwi-EOS ye-cinema ukuya kwiindili ezininzi.
KwiLebhu yokuPhuthuka kweeNkonzo, uLoren Simons, iNjineli yeeNkcukacha zeeNkcukacha zeMatriki, Canon USA, Inc. ichaza ukuba eli gumbi lithile lakhelwe ukuhlanganiswa. Abafaki-zixhobo bakhonkco bangaboniswa ukuba indlela yokusebenza yabo esebenzayo isenokungena ngayo Kwincwadi Yeehadi. Ngele ndlela, Abenzi befilimu banokubona indlela ukudala kwabo kuza kubonakala ngayo kwiintlobo ezahlukeneyo zemveliso. Umzekelo, usebenzisa CanonIincwadi ze-4K ezibhekiselele kunabo bonke ezibonisa ubugcisa bobubanzi obuphezulu obuphezulu kunye ne-high-definition television (uhlobo olufumaneka kubasebenzisi bemihla ngemihla) lunokubonisa abahleli ukuba umsebenzi wabo wokugqibela uza kubonakala njani.
UTim Smith, uMcebisi wezeMpilo oyiNtloko, Canon USA, Inc. esikhombisa kwenye indawo ilebhu - The iMifanekiso Lab - kuhlolwa iikhamera, lenses, esweni - ecosystem yabo yonke; Oku kuya kuqinisekisa ukuba xa uhleli kunye ne Canon Ikhamera, amava akho alungileyo.
UKen Rowe, uMcebisi wezobuGcisa, Canon USA, Inc. ibonisa ezinye iinkonzo zangasemva ezivumelayo Canon IBurbank ukuba isebenze. Oku kubandakanya iinkonzo ze-SAN kunye neprojekti yeBarco! Oku kuvumela abantu ukuba basebenzise izixhobo ezifanayo ezikhoyo kwizindlu ezinkulu zeposi ukuze zikhuphe iifilimu zazo kwaye zibone indlela abaza kujonga ngayo.
UJoseph Bogacz, uMcebisi wezeNjineli wobuNjineli, Canon USA, Inc., ingabonwa kwigumbi screening le, nendlu Barco 4K DP4K-P projektha, iiseva SAN, AJA KUMO 6464 3G-SDI ividiyo kunye umzila audio, kunye neenkqubo nomgangatho SGO Mistika ukunika iindwendwe amava theatre xa uhlola Umsebenzi wabo ogqityiweyo.
Andifuni ukulibala i-Expresso Counter - ekubeni ukhona Sele sele uvakalelwa ngathi uhlala kwigalari yezobugcisa, yintoni eya kuba ngumgangatho ogqityiweyo kodwa indebe yeNespresso? Ukuhlala ngaphakathi kwendawo ehamba ngokukhawuleza kukuthuthela kwindlu ekhofi ehlawulwayo-ngokulibala ukuba ukhona Canon IBusiness Service Centre!
Enye yezona nkalo ezinomdla kakhulu ngumthengi Ukubonelela. Ukuqhubeka kwesiko kwaqala CanonYokuqala hollywoodIsibonelelo, indawo ezongeziweyo zezobugcisa kunye neenkonzo ezifikelelekayo kunye nenkxaso yinto yokuqala yoshishino. Ukuqala ngendawo enkulu yokupaka engaphantsi komhlaba apho amakhasimende angakujabulela ukuhamba ngoMsombuluko-ngoLwesihlanu-enkonzweni, Canon I-Burbank iyonakalisa abathengi bayo abaqeqeshiweyo Ifilimu Kwaye usacinga imiphakathi eneziko eliphambili kwi-cinema yezobugcisa kuze kube yimhla.
Baye bakhuthaze abantu ukuba bazise ezinye iikhamera baze bafanise Canon Iikhamera zabo Indawo. Yindawo enhle yokuqhuba uvavanyo lwe-A / B, uthi uTim Smith, uMcebisi wezeMpilo oyiNtloko, Canon USA, Inc., ngexesha lokutyelela kweziko.
Indawo ezinikeleyo yeeStudios, izixhobo zokuPhumela kweZithuba, abaThengi kunye neMibutho yezobugcisa ngokufanayo, umxube onamandla wokuvavanya iimveliso kunye nokuvavanya, ukuqeqeshwa kwemveliso kunye nokuqhutyelwa komsebenzi, imicimbi yoshishino kunye nokulungiswa kwexesha elilindelekileyo kulindele bonke abo bangena kwiingcango zalo. Inyaniso, Canon Iimveliso ezisuka kwigalelo ukuya kwisiphumo, kunye nokufikelela okuphuculweyo kuqeqesho oluqeqeshwe kakhulu Canon Inkonzo kunye neqela lokuxhasa liphucula Canon Amava kumakhasimende kunye namaneliseko amanqanaba.
"Wonke umlawuli, umlawuli weefoto kunye nomqhubi wekhamera uya kuba nombono ohlukileyo weprojekthi yakhe. Asithengisi nto apha, kodwa sinokunikela ngamava kunye nenkxaso, "uPeck wachaza.
Canon IiNkonzo zoBugcisa (CPS) inikeza inethiwekhi enamandla yokuxhasa abafotoli bezithombe, abenzi bamabhayisikobho kunye neefomographers. Ikhalenda ekhawulezileyo yeemina zemfundo ezivela kwiingcali eziphezulu kwizixhobo zokusebenza zakutshanje kwaye Ifilimu Zobuchule, ezifana Canon Iiseshoni zokuFunda eziPhila, kunye nebhuleji yokuvavanya Canon Iikhamera kunye neelensi ziphucula izibonelelo zendawo. Nokuba igumbi elincinci lingaqulunqwa ukuba kubuthe iimboni kunye neziganeko ezizodwa!
CanonUkwahlukahluka kunye nenkqubo yokubandakanya kubandakanya iinqanaba, abafazi kunye nabantu abakhubazekileyo. Canon Ukholelwa ukuba abasebenzi abavela kwimimandla eyahlukeneyo bazisa iimbono ezahlukeneyo. Umzekelo, xa kuziwa kubafazi, Canon Uvuma amandla ootyhini njengabaholi kwiintsapho zabo, kuluntu nakwiindawo zokusebenza. Abafazi kwiNqanaba leNkokheli (WiLL) yikomiti ehamba phambili ephethe abaphathi abakhulu "abavela Canon USA ukuba ukwahlukana zoshishino kunye nkampani / nabasebenzisana mna ingxoxo eyoyikekayo kunye Doris Higginbotham, uMongameli ogama umdla ukulungelelanisa nokuxakekisa, exhobisayo, nokuxhobisa abasetyhini kunye uphuhliso lwabo emsebenzini kunye zobuqu. "; Canon I-Technology Technology Services, Inc., malunga ne-WiLL. Jonga ngaphezulu CanonKwiwebhusayithi kwi: Www.usa.Kwincwadi.com / internet / portal / us / ikhaya / malunga / imisebenzi / ukufakwa-hlukana /
Ekugqibeleni, uMvelisi Al Berman WeSizwe kaGeographic "Umhlaba LIVE"Wajoyina i-fray, echazwe nguEliott Peck noLarry Thorpe Iinkonzo zeeNgcono zeCanonNgexesha lokuvula Canon Burbank! I talente eninzi ... yonke into enhle "Canon Ukuthathwa "kweeNational Geographic izifundo ... ngoku, ucinga zonke iifoto kunye namavidiyo Canon Unoxanduva lweminyaka yonke, ngaba LOKHU lenza "umfanekiso oMnandi?"
Ukhenketho oluthile kunye nolwazi oluninzi kwiziko laseBurbank - Usa.canon.com/Canon-Burbank
Shedyuli Yakho Ukutyelela Lapha!
Ngobusuku ngaphambi kokubonisa, Canon wasiphatha kwi-beyond-beautiful Castaway Restaurant !!!
Umhleli-oyiNtloko, uMshicileli at Broadcast Beat Magazine, LLC.
URyan waqala ukusebenza kumashishini okusasazwa kunye nokuthunyelwa kwithuba emva kweminyaka elishumi elinesibini! Uvelise iinkqubo zethelevishini, wakha iindawo ezinkulu zokuvelisa izikhundla, ezibhaliweyo kwezinye iincwadi eziphambili zoshishino kwaye yayinguye injini yomsindo malunga neminyaka elishumi. URyan wabhala ngaphambili kwi-Broadcast Engineering Magazine, Creative COW kunye neeprojekthi zakhe ziye zavezwa kwiinkcukacha ezininzi.
Izithuba ezandwendwe nguRyan Salazar (ndinibone nonke)
U-Aimée Ricca Ukwaziswa ngokuKhupha iZenzo zokuThengiswa kweMigca yokuCwangcisa kwi-SMPTE! - Juni 8, 2018
I-NAB: Yonke Yayiqala Kanjani ... - Matshi 17, 2018
I-NAB Bonisa amaqela: 2018 NAB Bonisa i-Party & emva kweeyure Uluhlu lweZenzo - Februwari 16, 2018
Ukunciphisa i-bitrate Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Burbank California Canon Canon USA CES2017 Eliott Peck H264 / H265 eye HDR / WCG HEVC HEVC / AVC UkuTyekiswa kobuKhono neQela loNxibelelwano Immersive Inc. Ukubonakaliswa kwe-4K kunye ne-DI Isovideo JCT-VC MStar Kwigumbi elincinci NLE workflows Ukunciphisa ingxolo Ukulungiswa kwesayithi Imveliso yokuposa SoftAtHome UHD / 4K / HD Viarte Injini yeVidiyo Warsaw Ibhodi yo ku sebenza	2017-07-16
Previous: I-Digital Agency Engama-Internships - Fall 2017
next: I-Canon Burbank: Uhambo loKhenketho
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Canon Burbank Iyaba Yinyaniso". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/canons-burbank-facility--yond--wesome-canonusapro-canon/. Enkosi.